Ekhaya: Ivenkile eKhaya yeZaphulelo kwiFenitshala ekufuneka uyazi - Indlela Yokuphila
Ekhaya: Ivenkile eKhaya yeZaphulelo kwiFenitshala ekufuneka uyazi
Ukuba kuye kwafuneka ndikhethe ivenkile yokuhombisa yasekhaya njengeyona ndiyithandayo ngoku, kungafuneka ndihambe neeGoodGoods. Ndingathini - ndiyayithanda into elungileyo! Kodwa ivenkile yam yokuthenga kungekudala inokuba nokhuphiswano ngohlobo lomntwana omtsha kwibhloko yaseKhaya.
Uninzi alukaqhelani neKhaya, kuba alukafikeleli kwimakethi nganye yase-US, kodwa inkampani ibikho ukusukela ngo-2011. EKhaya ibanga ukuba inezinto kuhlahlo-lwabiwo mali lonke, kwaye evenkileni yabo uyakufumanisa ukuba banazo Iindidi ezifanayo zeemveliso njengeeGoodGoods.
Kodwa Umahluko kukuba uninzi lwezinto eziseKhaya azichazwanga, ziyilebheli zabucala, okanye zenzelwe zona ngokukodwa. Kwaye iba ngcono — iivenkile zazo zinkulu. Cinga ngendlela ezazinkulu ngayo iivenkile ze-K-mart, kuba zikwindawo efanayo. Ivenkile nganye yaseKhaya imalunga neenyawo ezili-110,000 zeenyawo, nto leyo encinci encinci kuneThagethi yakho ephakathi.
Ekhaya bayaqonda ukuba ngubani umthengi wabo kwaye yintoni ayifunayo (isilumkiso sasespoiler: rhoqo, uhlaziyo lwe-chic ekhayeni lakhe). 'Ikhaya lakhe lingumboniso nolwandiso lokuba ungubani,' inkampani iwebhusayithi ithi . 'Ukuhombisa ikhaya lakhe yinkqubo eqhubekayo, eguqukayo enokuba lula njengokutshintsha ii-patio zeepatiyuni kunye nepatheni entsha yamaxesha okanye ukubandakanyeka njengokuhlaziya ukubukeka kwegumbi lonke okanye indlu iphela.'
Okwangoku, kukho kuphela i-180 kwiivenkile zaseKhaya ngaphesheya kwe-US, inani elihamba ngokuthelekiswa ne-HomeGoods's 500. Kodwa inkampani inezicwangciso zokwandisa ukuya kwiivenkile ezingama-600 kungekudala, kungakho nje Ekhaya ukuza edolophini. kufutshane nawe. Kwaye ukuba kunjalo, uya kufuna ukulungisa isipaji sakho!
UTainaya Nash Umntu oHlela UTainaya Nash ngumlingani ongumhleli kwi-Cosmopolitan egubungela ubuhle.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
igumbi lokwahlulahlulahlula ikea
Imibala yepeyinti yenkwenkwe yaseDutch
umbono wokuhombisa igumbi